Yintoni i-yohimbine kunye nendlela isebenza ngayo | Ingcali ye-Aasraw Steroid powder
/Blog/Ulwazi lo shishino/Iyintoni i-yohimbine kwaye isebenza njani?
ezaposwa ngomhla 09 / 23 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ulwazi lo shishino.
Yintoni i yohimbine?
Yohimbine luhlobo umkhiqizo, owaziwayo phakathi abanxibe impahla Ummandla. Uphucula imilambo yegazi kwaye ukwandisa ukuhamba kwegazi kwi-penis, enceda ekuphuculeni umsebenzi we-erectile. Olu hlobo lusetyenziswe ngamakhulu eminyaka njenge-aphrodisiac kunye nokuphucula impilo yezesondo kunye noluntu, kwaye mhlawumbi ukuphucula ukusebenza kwengqondo. Kwaye ikwasetyenziswa ngokubanzi Ukulahlekelwa ngamatye, isetyenziswe ngokutsha ukulahlekelwa ngamafutha ngexesha lokuzila ukudla okufutshane.
Unokwenzeka ukuba uncede ukugcina ubunzima obunempilo /Ukulahlekelwa ngamatye
Enye yeenzuzo eziphezulu zeJohimbine yinto enokukunceda ukugcina ubunzima obunempilo. Kwisifundo esinye, abadlali abangamashumi amabini bebhola banika uYohimbine kunye nomnye amabini anikwe i-placebo. Iqela leJohimbine lalinomzimba ocolekileyo ocolekileyo ekupheleni kwetyala leveki ezintathu. Akuzange kuthintele ubunzima be-muscle okanye ukusebenza kwezemidlalo kwaye akukho nxaxheba kwabaqaphele nayiphina imiphumo emibi.
Kwesinye isifundo, amabhinqa angamashumi amabini anesibini abanjwe esilingo semilingo yesithathu kwikliniki yokuvavanya imiphumo ye Yohimbine ngesisindo. Bonke badla ukutya okuphantsi kwe-energy (i-1000 kcal / imini) ngexesha lovavanyo. Isiqingatha sabasetyhini banikwa i-placebo kwaye esinye isiqingatha sanikwa iJohimbine ngamaxesha amane ngosuku. Iqela leJohimbine lalinomlinganiselo wokunciphisa ubunzima ekupheleni kwetyala. I-Yohimbine yayibonakala iphinda ikhuthaze inkqubo enempilo. Kwakhona, akukho namnye wabasetyhini ababike naziphi na iziphumo zempembelelo ngexesha lovavanyo.
Ngamana unokunceda ukukhuthaza i-libido yamadoda kunye nokusebenza ngokwesondo
Omnye umrhumo omdala wemveliso (Afrodex, Bentex Pharmaceuticals) idibene ne-5 mg nganye ye-yohimbine,methyltestosterone, kunye ne-nux vomica kwi-capsule ukwenzela unyango lwendoda enamandla kunye nokungabi namandla. Nangona inani leemvavanyo zonyango laqhutyelwa kule mveliso, iziphumo ngokubanzi zazingenakuchukumisa. Uphando olutshanje luye lwabonisa ukuba izidakamizwa eziphezulu zezilwanyana (i-6 mg kathathu ngosuku) zinokusebenza kwonyango lamadoda angenamandla. Uhlalutyo lwe-meta lweengcali zeklinikhi lufumane i-yohimbe ephezulu kune-placebo. Zonke iiphononongo ezivandlakanywe zifumene impendulo enhle ku-yohimbe kwaye akukho miphumo echaphazelekayo echazwe.
Uhlamvu lwemali lunamacala amabini. Zonke iimveliso zonyango zinomphumo omncinci okanye obunzima.
Imiphumo emibi ye-yohimbine ibandakanya:
ukuxhalaba, ukucaphuka, okanye ukukhathazeka;
Ngolunye ulwazi, nceda qha ga mshelana:
Siyabonga ngqalelo yakho, yabona ngexesha elizayo!
Indlela yokwenza i-Testosterone Cypionate iphelile kwi-Raw Steroid Powders	Yintoni eyenziwa nguTadalafil?